Ingilaanditti gabaan Digiriiwwan sobaa ho'eera - BBC News Afaan Oromoo
Ingilaanditti gabaan Digiriiwwan sobaa ho'eera
16 Amajjii 2018
Goodayyaa suuraa Ripoortarri BBC qaama Yunivarsiitii Niksoon of fakkeesserraa $3,600n digiriin kennameefiira
Lammileen Ingilaand kumaatamaan lakkaawaman qarshii miiyoona hedduun digiriwwan sobaa bitachuu isaanii gabaasni qorannoo BBC ifa baase.
Namoota ragaalee barnootaa sobaa bitatan keessaa ogeeyyiin fayyaa, narsoonnii fi kontiraaktaroonnii akka argaman beekameera.
Lammiin Ingilaand tokko ragaa barnootaa sobaa bitachuuf hanga paawundii 500, 000 kafaluunis dhagaahameera.
Mummeen Barnotaa dhimma kana ilaalchisee yaada kenneen '' digiriiwwan sobaa gurguramaa jiran hambisuuf tarkaanfilee gurguddoo fudhanna, warreen seeran barnoota isaanii hordofan jeeqa'' jedheera.
Dhaabbanni akka ''kaampaanii IT addunyaa isa guddaatti of lakkaahu'' Akzaakt jedhamu wanta kana duuba jira jedhameera.
Yunivarsiitilee Biruukiliin Paarki fi Niksan fakkeeffamuun toora intarneetii irratti kan argaman yommuu ta'u, dhugaa fakkeessuuf suurota barattootaa sesseqanii fi barruulee soba akkasumas faaruu dhaabbaticha weeddisan ofirraa qabu.
Akka ragaaleen BBC raadiyoo 4 walitti qabeetti bara 2013 fi 2014 tti ragaaleen barnootaa Akzaakt kan sobaa digirii lammataa, Doktireetii fi PhD'wwan 3,000 ol gurguramaniiru.
Goodayyaa suuraa Yunivarsiitileen onlaayinii hedduun Akzaakt kan akka Baayicheester Yunivarsiitii suura fi bifiyye walfakkataa qabu
Hospitaala fi mana barnootaa fayyaa Landanitti argamuuf gorsaa namni ta'e tokkos wal'aansa qaama keessaatiin bara 2007 qaama Yunivarsiitii Belfoord of fakkesse irraa digirii sobaa bitachuun isaa beekameera.
Ogeeyyiin fayyaa tokko tokko ragaaleen barnootaa of harkaa qaban dhugummaan isaanii waan hin raggaaneef itti fayyadamaa hin jirru jedhu.
Ogeessi fayyaa tokko Digirii sobaa gosa barnootaa bulchiinsa hospitaalaatiin bitatus Ingilaand keessatti akka itti hin fayyadamne dubbateera.
Gorsaan wal'aansa tasaa daa'immanii tokkos gosa barnootaa 'Health care Technology' tiin digirii lammataa fudhatee qoranno BBCn gaggesseen garu sobaa ta'uun akka ifa bahe gaaf itti himamu heddu dinqamuu isaa ibseera.
''Waraanni masaraatti imale jijjiirama gufachiisuufi''
Yeroo duraaf dubartiin Ministira Ittisaa ta'an eenyu? Kan hojjetaaf hawaasummaa hoo?
'MM Abiy Ahimad malaan Amaara aangoo keessaa hambise'
MM Dr Abiy Ahimad torban dhufu Awurooppaatti imalu
Atileetiin Keeniyaa malaammaltummaan himatame harka kennate
Kongoon hidha anniisaa elektiriikaa guddicha addunyaa ijaaruufi
Baqaqsanii yaaluun deessisuun daran dabalaa jira
Yunaayitid Isteet ragaa 'ajjeefamuu Kaashogi' gaafatte